Ubomi kunye neMimangaliso ye-Saint Brigid uBridget Ireland
Unqulo & Umoya Bangcwele
St Brigid nguMphathi oyiNtloko weeNtliziyo
Nanku ukukhangela ebomini kunye nemimangaliso ye-Saint Brigid, owaziwa nangokuthi nguSanta Bridget, uSaint Brigit, noMariya waseGael, ababehlala e- Ireland ukusuka ku-451 ukuya ku-525. USt. Brigid ungumgcini oyingcwele yabantwana :
Fe bruwari 1
UStron Saint Of
Iintsana, ababelethisi, abantwana abangabatshatile abazali, abaphengululi, iimbongi, abahambi (ikakhulu abo bahamba ngamanzi ), kunye nabalimi (ikakhulukazi abalimi bemveliso yobisi)
UThixo wenza imimangaliso emininzi ngoMbusi ngexesha lokuphila kwakhe, amakholwa athi, kwaye ininzi yabo inxulumene nokuphilisa .
Ibali elinye lithetha ngoBrigid unyanga odade ababini abangazange bave okanye bathethe. UBridget wayehamba ngehashe kunye noodade xa uBrigid wehashe wayekhwele kwaye uBrigid wawa, ehlaba ikhanda lakhe phezu kwelitye. Igazi likaBrigid kwilonda lakhe lixutywe namanzi emhlabathini, kwaye wafumana ingcamango yokuxelela oodade ukuba bathulule umxube wegazi namanzi entanyeni yabo ngelixa bethandaza egameni likaYesu Kristu ukuze baphilise. Omnye wenza njalo, waphiliswa, ngelixa elinye laphiliswa nje ngokuthinta amanzi agazi xa eguqa phantsi ukuze ahlole uBrigid.
Kwimbali yamangalisa, uBrigid waphulukisa indoda eyayicinezelekile ngeqhenqa ngokusikelela intombaza yamanzi kunye nokuyalela omnye wabafazi kwiindwendwe zakhe zokuncedisa loo ndoda ukuba isebenzise amanzi abasikelele ukuhlamba isikhumba. Ikhumba lomntu lagqitywa ngokupheleleyo.
Ibhugid yayisondele kwizilwanyana, kwaye amabali amaninzi emimangaliso ebomini bakhe inxulumene nezilwanyana, njengokuba wathintela inkomo eyayisele ibisiwe kwaye ilisikelele ekuncedeni abantu abalambileyo nabanxaniweyo.
Emva koko, xa babela inkomo, bekwazi ukufumana amaxesha angama-10 ubuninzi bebisi njengesiqhelo.
Xa uBrigid wayekhangela umhlaba angayisebenzisa ekwakheni iindwendwe zakhe, wabuza ukumkani ongenanto ukuba angamniki umhlaba nje nje ngengubo yakhe, kwaye wathandazela ukuba uThixo akhulise ngengubo yakhe ukuze ancede ukumkani ngaphandle.
Ibali lisithi isambatho sikaBrigid saqhubeka sikhula njengoko ukumkani wayebukele, egubungela indawo enkulu yomhlaba awayekela kuyo iindwendwe zakhe.
UBrigid wazalwa ngekhulu lesi-5 leminyaka e-Ireland ukuya kubazali bamahedeni (iDubhthach, isikhulu sezindlu zaseLeinster) nomama ongumKristu (uBroca, inceku elalikholelwe ngokushumayela kukaVangeli likaPatrick ). Kuthatyathwa njengekhoboka ekuzalweni, uBrigid wanyamezela ukuphathwa kakubi kubanikazi bekhoboka abakhulayo, kodwa wavelisa idumela lokubonisa ububele obungaphethekiyo nokupha abanye. Ngesinye isikhathi wabanikela ngonina lonke unobumba webhetele kumntu osweleyo waza wathandazela ukuba uThixo azalise ukunikezela ngonina, kwaye ibhotela yayibonakala ngokumangalisayo kwimpendulo yemithandazo kaBrigid, ngokuphathelele ibali malunga nobuntwana bakhe.
Ubuhle bakhe bobuhle (kubandakanywa amehlo ahlaza okwesibhakabhaka) bethanda abaphathi abaninzi, kodwa uBrigid wagqiba ekubeni angatshatanga ukuze anikezele ubomi bakhe ngokupheleleyo kwinkonzo yobuKristu njengendoda. Ibali lasendulo lithi xa amadoda engavumi ukuphandana naye, uBrigid wathandazela ukuba uThixo amthathe ubuhle bakhe, kwaye wakwenza okwethutyana ngokumkhathaza ngobunzima buso kunye nesibindi. Ngethuba lobuhle bukaBrigid babuya, abaqeqeshi bakhe ababenokuthi baye kwenye indawo bafune umfazi.
UBrigid wasungula iindwendwe phantsi komthi wemithi e-Kildare, eIreland, kwaye yanda ngokukhawuleza ibe yindawo yokuhlala yabantu abahlala kwindoda yabafazi kunye nabasetyhini abatyelela abantu abaninzi abaye bafunda inkolo, ukubhala kunye nobugcisa apho. Njengoko inkokheli yoluntu yaba yiziko lase-Ireland lokufunda, uBrigid waba yinkokeli ebalulekileyo yowesifazane kwihlabathi lasendulo nasebandleni. Ekugqibeleni wagqala indima yombhishophu.
Kwi-monastery yakhe, uBrigid wamisa ilangatye lomlilo ongunaphakade ukumela ubungqina boMoya oyiNgcwele kunye nabantu. Leli langatye lacima iiklasi eziliqela emva kwexesha loNguquko, kodwa luphinde lukhanyise ngo-1993 kwaye lushisa eL Kildare. Umthombo uBridget owawusebenzisa ukubhaptiza abantu ngaphandle kweL Kildare, kwaye abahambi bahambela umthombo ukuba bathethe imithandazo kunye neetayibhanki ezinemibala emnqamweni onqwenela ngasecaleni.
Uhlobo olukhethekileyo lomnqamlezo owaziwa ngokuthi " umnqamlezo oNgcwele we-Brigid" luyaziwayo kulo lonke elase-Ireland, kwaye likhunjulwa ibali elidumileyo apho uBrigid waya khona kwikhaya lenkonzo yamahedeni xa abantu bamxelela ukuba wayefa kwaye wayefuna ukuva umyalezo weVangeli ngokukhawuleza . Xa uBrigid efikile, le ndoda yayimnandi kwaye idangele, engafuni ukuphulaphula oko i-Brigid yayithethayo. Ngoko wahlala kunye naye wathandaza, kwaye ngelixa ebenjalo, wathatha enye ingcambu evela emhlabathini waza waqala ukuwubeka ngomfanekiso wesiphambano. Kancinci le ndoda yathula phantsi yabuza uBrigid oko wayenzayo. Wachaza iVangeli kuye, esebenzisa isiphambano sakhe esenziwe ngezandla njengesibonelelo esibonakalayo. Le ndoda yafika ekukholweni kuYesu Kristu, kwaye uBrigid wabhaptiza ngaphambi kokuba afe. Namhlanje, abaninzi abantu base-Ireland babonisa umnqamlezo we-Saint Brigid emakhaya abo, kuba kuthiwa uncede ukucima ububi kunye nokwamkela okuhle .
UBridget wafa ngo-525 AD, kwaye emva kokufa kwakhe abantu baqala ukumhlonela njengongcwele , beyithandazela kuye uncedo lokufuna ukuphilisa kuThixo, ekubeni imimangaliso emininzi yokuphila kwakhe yayihlobene nokuphilisa.
Kutheni iSt. Valentine iNgcwele oyiNtando Yothando
U-Saint Agnes waseRoma, iNtombi kunye noMartyr
USabriyeli i-Archangel, i-Patron Saint yoNxibelelwano